Blog-Tipping: ဒါဟာ Reader Payback Time! | Martech Zone
Blog-Tipping: ဒါဟာ Reader Payback Time!
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 5, 2007 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 23, 2014 Douglas Karr
တစ် ဦး ချင်းစီ၏အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါစေနှင့်! ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီလို။ ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်အချိတ်အဆက်အချို့ရရှိလိမ့်မည်။
ထိုဖော်ပြချက်သည် Technorati နှင့် Search Engines တို့တွင်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရမယ် အဖျား ဒါဟာ!
သင့် Blog ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
၁။ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်ဖော်ပြပါ။
ငါ့ကတိ ခင်ဗျားရဲ့အပြင်အဆင်၊ အသုံး ၀ င်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နှစ်မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်။ SEO ဆိုသည်မှာသင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ကိုပြုပြင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာရန်နှင့်သင်၏နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ။ ဘလော့ (ဂ်) များစွာကိုစုစည်းရန်နှင့်စုပေါင်းရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ဘလော့ (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်တိုင်းအတွက်အချက်ကိုထူးခြားစေရန်ကြိုးစားခြင်းကိုပြုလုပ်ပါမည်။
ဒါပဲ! သွားကြရအောင် ဘလော့ဂ်တင်ရန်!
သင်ဤသူ link ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူမည်သူမဆိုလက်ဆင့်ကမ်းရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Tags: Blog တင်ရန်စာဖတ်သူကိုပြန်ဆပ်
ဂူဂဲလ် Adwords: နှစ်ကောင်ကိုကယ်တင်ပါ။
Blog-Tipping: စိတ်ကူးစိတ်သန်း + ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
5:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 56
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 12
မင်းကို အကြံပေးလိုက်ပြီ။ 🙂
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 52
ဟေ့ Doug၊ ငါ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ လင့်ခ်တစ်ခုတင်ထားတယ်-
မင်းမှာ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခု ရှိပြီး ငါ အဲဒါကနေ အများကြီး သင်ယူနေတယ်။
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 47
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည် အချိန်မည်မျှသက်တမ်းရှိသနည်း။ ငါ့မှာ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်စရာရှိတယ် (မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြဖို့ အဲဒီထဲမှာ 'ဘလော့ဂ်' နဲ့ အလုပ်အသစ်တချို့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူး။
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 24
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 52
အကြံပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ 🙂
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 43
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင့်အား တောင်းဆိုချင်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ ဤအရာကို လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။ http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 04
Blog သည် အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်လိုပါသလား။ ကျေးဇူးပါ။
6:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 20
အင်္ဂလိပ်မဟုတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်အတွက် အကြံဉာဏ်အချို့ကို ပေးချင်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။ အကြောင်းအရာကို ငါအကဲဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အပြင်အဆင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ SEO စတာတွေကို ကြည့်ချင်ပါတယ်။
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 26
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 11
မင်္ဂလာပါ! ဖြေကြားမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 26
Doug - သင် Hamelife ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လည်ပတ်နေသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဤကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ မကြာသေးမီက ပို့စ်တွင် သင့်ထံသို့ လင့်ခ်ချိတ်ထားပါသည်။ အိုး ငါ့! Bennet Girls များသည် Weekest Links များတွင် ရှိနေသည်။.
မည်သည့် အကြံဉာဏ်ကိုမဆို ကျေးဇူးတင်ရှိပါမည်။
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 22
ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုက်၏အောက်ခြေညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်၏ blogroll တွင် သင့်ဆိုဒ်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုထည့်ထားပါသည်။
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 25
ဟမ်၊ မဲပေးသူအပေါ်အခြေခံ၍ သင့်တွင် Doug ကိုယ်လိုပုံနှစ်ပုံရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ 🙂
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 09
အလုပ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာက ကျွန်တော်စစချင်းတုန်းက ဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက် အကြံပြုချက်တစ်ခုပဲ လုပ်ချင်ခဲ့တာပါ – ဒါပေမယ့် စပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကူညီနိုင်တော့ဘူး။
8:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 53
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 39
မင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငါယူချင်ပါတယ်။ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် ထောက်ပြထားသော ပို့စ်မှာ-
ပြီးတော့ အကြံပေးချင်တာက ဘလော့ဂ်က URL ထဲမှာရှိတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 51
Douglas ကမ်းလှမ်းချက်က ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ မင်းရဲ့ပညာကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ရဲ့ အကြံပြုချက် ပို့စ်ပါ။ Dawud Miracle ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ စာရင်းသွင်းထားပေမယ့် မင်းကို ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး။
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 33
ဒါကိုကြိုက်တယ် Doug! Win-win – ဒါဟာ blogtipping ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အတော်လေး ကိုက်ညီပါတယ်။ 🙂
9:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 26
11:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 31
ဒါက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများအတွက် အလားတူအရာကို မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို အဖြေရှာရန် ကြိုးစားနေပါသည်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပို့စ်ပါ။
Egg Marketing ၏ အသေးစားစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 02
ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူး Doug ။ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် မိနစ်အနည်းငယ်ရှိလျှင် သင်၏ဉာဏ်ပညာကို များစွာတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 07
Doug က မင်းကို သတင်းပေးခံရတယ်။ http://netglobalbooks.com/blog/
အကြံဉာဏ်များ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များကို အလွန်တန်ဖိုးထားပါသည်။
သင့်ဘလော့ဂ်မှ နောက်ထပ် အကြံဥာဏ်ကောင်းများနှင့် ပညာရေးအတွက် ကျွန်ုပ်ပြန်လာပါမည်။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 32
အေး မောင်၊ အကြံကောင်းလိုက်တာ။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 06
Doug – သခင်ကိုယ်တိုင် သင်ယူရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သည်းမခံနိုင်ဘူး။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အား လွန်စွာအားဖြည့်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အတွေးအမြင်များကို ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 50
မင်းကိုစစ်ဆေးပြီး ငါ့အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "ယေရမိရဲ့ ဝဘ်ဗျူဟာများ" မှ "ဘလော့ဂ်သတင်းပေးချက်" ကိုရယူဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ဘလော့ကို အကြံပြုပေးပါ။ အများကြီးကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 15
အိုကေ၊ ဒါက နောက်ထပ် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုပါ။
16:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 47
ဒါက ကျွန်တော့်ဘလော့ဆိုက်ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံပေးပါ။
17:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 47
18:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 07
Doug ဟိုင်း၊ ငါတို့ကို ကူညီဖို့ မင်းရဲ့ စေတနာကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု တင်ပြီးပြီ။
ဒီမှာ link ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 36
20:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 50
အကယ်၍ သင့်တွင် "အဖျားခတ်ခြင်း" စွမ်းအင်အချို့ ကျန်ရှိနေသေးပါက၊ သင်သည် PPC Hero ကို ကြည့်ရှုနိုင်လျှင် ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။
ဘလော့ဂ်အကြံပြုချက်- နောက်တစ်ခု ကြီးမားသောအရာ
21:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 43
တနင်္လာနေ့ နံနက်အတွက် စီစဉ်ထားသော ပို့စ်
ငါ မင်းငါ့ကို ပစ်ထားရမယ့် အရာတွေ - ပုံစံခွက်၊ အပြင်အဆင်၊ SEO - အရာအားလုံးနဲ့ အရာအားလုံးကို ငါရှာနေတယ်။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအချို့ပြုလုပ်ရန် ရှာဖွေနေပြီး မည်သည့်အရာက အလုပ်မဖြစ်သည်ကို သိရန် လိုအပ်ပါသည်။
23:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 59
ဤအကြံပြုချက်သည် သင့်အား အလွန်အလုပ်ရှုပ်စေမည့်ပုံပေါ်သည်။ ဒါကတော့ မင်းရဲ့ link နဲ့ ငါ့ပို့စ်ပါ
B2B အိုင်တီနှင့် လူမှုမီဒီယာ 2- ရောင်းချသူအမြင်
31:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 16
သြဂုတ်လ 1 ရက် 2007 ခုနှစ် 3:02 နာရီ
Doug - ဒီမှာ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ရဲ့ လင့်ခ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများနှင့် အသုံးဝင်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် အဖွဲ့ဝင်-မောင်းနှင်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု။ ။ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အသင်းဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လူများပြန်လာခြင်းကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကို ကျွန်ုပ်လည်း စိတ်ဝင်စားပါသည်။ BTW၊ Starbucks တွင် သင်၏ ကဖိန်းဓာတ် စွဲလမ်းမှုကို ကျွေးမွေးရန် သင်၏ နောက်လာမည့် လည်ပတ်မှု အတွက် ခရီးစဉ်ကို ကျွန်ုပ် "ကြိုတင် ပေးချေခြင်း" ဖြစ်သည်။
သင့်ဘလော့ဂ်ကို တည်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ Feed Room သို့လည်း ထည့်ပေးနေပါသည်။ http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Paul Dunay နဲ့ မင်းရဲ့အင်တာဗျူးကနေ ကောက်နှုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 40
Doug - ငါ့ဘလော့ဂ်ကို ညွှန်ပေးဖို့ ဘယ်အချိန် လာရမလဲလို့ တွေးနေသလား။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကို 8/1 တွင် သင်၏ဆိုင်းငံ့စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ယခု 10/1 ဖြစ်သည် — ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်သည် သင့်အား Starbucks တစ်လုံးဝယ်ပြီးဖြစ်သည်။
ဘလော့ - title=“လက်ရှိပညာ”
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.mycatalyze.org
သြဂုတ် 2, 2007 မှာ 8: 11 AM
မင်္ဂလာပါ Doug; ငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမှန်တယ်လို့ မသိဘူး။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအား ဤလတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့ကို အစပြုသည့်အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အကြံပြုချက်များကို အတိုချုံ့လိုက်ပါသည်။ သူတို့သည် အခြားဘလော့ဂ်တစ်ခုအား ဖော်ပြပြီးနောက် ၎င်းတို့အား အကြံဉာဏ်များ ပေးဆောင်လာကြသည်။ မင်းငါ့ကို ပေးနိုင်သမျှ အကြံဥာဏ်တွေကို ငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
သြဂုတ် 10, 2007 မှာ 5: 50 AM
Infos die Danke!
5:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 5, 32
လူမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ ပို့စ်များ ဆက်တိုက်ရှိပါသည်။ Technorati Authority အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဤနေရာတွင် သင့်ပို့စ်ကို နမူနာကောင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မင်း အပြုံးတစ်ပွင့်ရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ ဒီမှာကြည့်ပါ
တစ်ခါတရံမှာ Viral ဖြစ်တာ သေချာပေမယ့် Collage မဟုတ်ဘူး - စီးပွားရေးသက်သက်ပါ။